Mma Anuonyam Mmɔ Wo | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Nea ne honhom dwo no benya anuonyam.”—MMEB. 29:23.
Anuonyam bɛn na yebetumi anya afi Onyankopɔn hɔ?
Dɛn na ebetumi ama Onyankopɔn anuonyam abɔ yɛn?
Ɔkwan bɛn so na yɛn boasetɔ betumi ama afoforo anya anuonyam?
1, 2. (a) Hebri asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “anuonyam” no kyerɛ dɛn? (b) Nsɛmmisa bɛn na yebesusuw ho wɔ adesua yi mu?
SƐ WOTE asɛmfua “anuonyam” a, dɛn na ɛba w’adwenem? Onyankopɔn abɔde a ɛyɛ fɛ anaa? (Dw. 19:1) Anaa sɛnea nkurɔfo hoahoa asikafo ne animdefo anaa wɔtontono wɔn no? Hebri asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “anuonyam” wɔ Bible mu no kyerɛ biribi a emu yɛ duru. Tete no, na wɔde dwetɛ anaa sika kɔkɔɔ na etwa sika. Sika no mu duru na ɛkyerɛ ne kɛse. Enti asɛmfua a wɔkyerɛ ase “anuonyam” no betumi akyerɛ biribi a ɛsõ anaa ɛho wɔ nyam.
2 Nnipa de, sɛ obi wɔ tumi, dibea, anaa edin a, na yedi no ni. Onyankopɔn nso ɛ, dɛn na ɔhwɛ ansa na wahyɛ obi anuonyam? Mmebusɛm 22:4 ka sɛ: “Ahobrɛase ne Yehowa suro—ɛde ahonya ne anuonyam ne nkwa na ɛba.” Osuani Yakobo nso kyerɛwee sɛ: “Mommrɛ mo ho ase wɔ Yehowa anim, na ɔbɛma mo so.” (Yak. 4:10) Anuonyam bɛn na Yehowa hyɛ nnipa? Dɛn na ebetumi ama saa anuonyam no abɔ yɛn? Yɛbɛyɛ dɛn aboa afoforo ma wɔanya saa anuonyam no?
3-5. Dɛn na Yehowa yɛ de hyɛ yɛn anuonyam?
3 Na odwontofo no wɔ awerɛhyem sɛ Yehowa beso ne nsa nifa na wahyɛ no anuonyam. (Monkenkan Dwom 73:23, 24.) Dɛn na Yehowa yɛ de hyɛ n’asomfo a wɔbrɛ wɔn ho ase anuonyam? Ɔfa akwan pii so yɛ saa. Emu biako ne sɛ ɔma wohu n’apɛde. (1 Kor. 2:7) Afei nso wɔn a wɔde n’asɛm yɛ adwuma na wotie no no, ɔma wɔn akwannya kɛse bi—wɔbɛyɛ ne nnamfo.—Yak. 4:8.
4 Bio nso Yehowa de asɛmpaka adwuma no ahyɛ n’asomfo nsa. Eyi yɛ ɔkwan biako a ɔfa so hyɛ yɛn anuonyam. (2 Kor. 4:1, 7) Bere a yɛreyɛ asɛnka adwuma no na yɛreboa afoforo nyinaa na yɛrehyɛ Yehowa anuonyam, na ɔno nso hyɛ yɛn anuonyam. Yehowa ahyɛ yɛn bɔ sɛ: “Wɔn a wodi me ni no, me nso medi wɔn ni.” (1 Sam. 2:30) Wɔn a wɔreka asɛmpa no nya din pa wɔ Yehowa anim na asafo no mufo nso bɔ wɔn din pa. Eyi nyinaa yɛ ɔkwan a Yehowa fa so di wɔn ni.—Mmeb. 11:16; 22:1.
5 Dɛn na wɔn a ‘wɔtwɛn Yehowa na wɔfa ne kwan so’ no benya? Bible hyɛ wɔn bɔ sɛ Yehowa ‘bɛma wɔn so na wɔanya asase no adi. Sɛ woyi nnebɔneyɛfo hɔ a, wobehu.’ (Dw. 37:34) Wɔwɔ anidaso nwonwaso bi: Wɔhwɛ kwan sɛ wɔbɛtena ase daa.—Dw. 37:29.
“MINNYE ANUONYAM MFI NNIPA HƆ”
6, 7. Dɛn nti na nnipa pii annye Yesu anni?
6 So biribi wɔ hɔ a ebetumi ama Yehowa anuonyam abɔ yɛn? Yiw. Ade biako a ebetumi ayɛ osiakwan ne sɛ yɛbɛhwehwɛ nnipa a wɔnsom Nyankopɔn anim dom. Bere a Yesu wɔ asase so no atumfoɔ bi yɛɛ saa. Ɔsomafo Yohane kyerɛwee sɛ wonyaa Yesu mu gyidi, “nanso Farisifo no nti, wɔampae mu anka sɛnea ɛbɛyɛ na wɔantu wɔn amfi hyiadan no mu; efisɛ na wɔpɛ nnipa anuonyam sen Onyankopɔn anuonyam mpo.” (Yoh. 12:42, 43) Sɛ saa atumfoɔ no anhwehwɛ Farisifo no anim dom a, anka wonyaa anuonyam a ɛsen nnipa de.
7 Bere a Yesu fii ne som adwuma ase no, ɔkyerɛɛ ade biako a ɛremma nkurɔfo nnye no nni. (Monkenkan Yohane 5:39-44.) Ná Israel man no ahwɛ Mesia no kwan mfe pii. Na ebinom nim Mesia no ho nkɔmhyɛ a ɛwɔ Daniel nhoma no mu. Enti bere a Yesu fii asɛnka adwuma no ase no, ɛbɛyɛ sɛ ebinom hui sɛ Mesia no na ayi ne ti. Osuboni Yohane fii ase kaa asɛm no ansa na Mesia no reba. Saa bere no nnipa pii kae sɛ: “Gyama ɔno ne Kristo no anaa?” (Luka 3:15) Afei de na Mesia a wɔahwɛ no kwan bere tenten no abedu a ɔrekyerɛkyerɛ, nanso wɔn a wɔakwadare Mmara no mu annye no anni. Yesu kyerɛɛ nea enti a wɔannye no anni. Ɔkae sɛ: “Mobɛyɛ dɛn na moagye adi bere a mugye anuonyam fi mo ho mo ho nkyɛn na munnye anuonyam a efi Onyankopɔn koro no nkyɛn no?”
8, 9. Fa kanea yɛ mfatoho fa kyerɛ sɛnea nnipa anim anuonyam betumi ama Onyankopɔn anuonyam abɔ yɛn.
8 Sɛ yɛpɛ sɛ yehu nea enti a nnipa anuonyam betumi afura yɛn ani na yɛannya Onyankopɔn anuonyam a, yɛmfa anuonyam ntoto kanea ho. Sɛ yɛto yɛn ani hwɛ soro ne asase so a, yehu akanea pii. Yɛreka yi, ebia woakae anadwo bi a wuhuu nsoromma mpempem pii wɔ wim. Nokwasɛm ne sɛ ‘nsoromma anuonyam’ yɛ fɛ. (1 Kor. 15:40, 41) Nanso yɛmfa no sɛ wowɔ kurow kɛse bi a nkanea ayɛ hɔ hyerɛnn. Sɛ woto w’ani hwɛ wim a, anhwɛ a worenhu nsoromma biako mpo. Adɛn, nkanea a esisi akwan ho ne nea ɛbobɔ adan ho hyerɛn sen nsoromma anaa? Dabi! Mmom nea ɛte ne sɛ, nkanea no bɛn wo dodo enti wuntumi nhu nsoromma fɛfɛɛfɛ a egu wim no. Enti sɛ wopɛ sɛ wuhu nsoromma no a, gye sɛ wufi nkanea no mu.
9 Saa ara na nnipa anim anuonyam betumi asiw yɛn anim na yɛanhu anuonyam a Yehowa pɛ sɛ ɔde ma yɛn no na kampɛsɛ yɛahwehwɛ. Nnipa pii ntie Ahenni ho asɛmpa no efisɛ wɔpɛ wɔn abusuafo ne wɔn nnamfo anim anuonyam. Onyankopɔn asomfo a wɔahyira wɔn ho so mpo, nnipa anim anuonyam betumi asum wɔn afiri. Fa no sɛ wɔde asasesin bi ama aberante bi sɛ ɔnkɔka asɛm no wɔ hɔ. Ɛkame ayɛ sɛ wɔn a wɔwɔ asasesin no mu nyinaa nim no, nanso wonnim sɛ ɔyɛ Yehowa Dansefo. Ehu nti ɔbɛka sɛ ɔrenkɔka asɛm no wɔ hɔ anaa? Anaa yɛmfa no sɛ onua bi de asi n’ani so sɛ ɔbɛyɛ pii wɔ Yehowa som mu, nanso wɔn a wɔntene wɔn ho nsom Yehowa redi ne ho fɛw. Dɛn na ɔbɛyɛ? Saafo yi nti ɔbɛgogow ne ho anaa? Anaasɛ ebia Kristoni bi ayɛ bɔne a emu yɛ duru. Ɔsom hokwan a osuro sɛ ebefi ne nsa anaa abusuafo ne nnamfo anim fɛre nti, ɔde besie anaa? Sɛ ɔpɛ sɛ osiesie ɔne Yehowa ntam a, ɛnde ‘ɔbɛfrɛ asafo no mu mpanyimfo’ ma wɔaboa no.—Monkenkan Yakobo 5:14-16.
10. (a) Sɛ wubu wo ho tra so a, dɛn na ebetumi ama woayɛ? (b) Sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase a, dɛn na yebenya?
10 Ebia wo ara wuhu sɛ worebɔ wo ho mmɔden wɔ asafo no mu nanso daa onua bi twe w’adwene si biribi so. Sɛ wobrɛ wo ho ase tie nea onua no reka a ebetumi aboa wo. Nanso ebia ahomaso nti wompɛ sɛ obi ka w’asɛm, anaa wuyiyi wo ho ano. Ɛba saa a wubesisi w’aso. Anaa fa no sɛ wɔde adwuma bi ahyɛ wo ne anuanom bi nsa na woaboa ma nneɛma akɔ yiye. Wobɛpɛ sɛ yɛbɔ wo din kamfo wo anaa? Sɛ wokɔ tebea a ɛte saa mu a, kae sɛ “nea ne honhom dwo no benya anuonyam.”—Mmeb. 29:23.
11. Sɛ nkurɔfo kamfo yɛn a, yɛbɛyɛ yɛn ade dɛn, na dɛn ntia?
11 Ɛsɛ sɛ mpanyimfo ne anuanom mmarima a wɔrebɔ wɔn ho mmɔden wɔ asafo no mu hwɛ yiye sɛ wɔrenhwehwɛ “nnipa anim anuonyam.” (1 Tim. 3:1; 1 Tes. 2:6) Sɛ onua bi yɛ biribi na anuanom kamfo no a, dɛn na ɔbɛyɛ? Yɛrentumi nka sɛ obesi nkaedum ama ne ho sɛnea Ɔhene Saul yɛe no. (1 Sam. 15:12) Nanso asɛm no ne sɛ, obegye atom sɛ Yehowa adom so na otumi yɛe anaa? Bio nso obegye atom sɛ nea obetumi ayɛ daakye biara gyina Yehowa so? (1 Pet. 4:11) Sɛ nkurɔfo kamfo yɛn a, yɛn koma na ɛbɛkyerɛ anuonyam kõ a yɛpɛ.—Mmeb. 27:21.
“MOPƐ SƐ MOYƐ MO AGYA NO APƐDE”
12. Ɛyɛɛ dɛn na Yudafo bi antie Yesu?
12 Sɛ yedi nea yɛn koma pɛ akyi a, ɛno nso betumi ama Onyankopɔn anuonyam abɔ yɛn. Sɛ yɛn koma di biribi akyi na obi ka nokware kyerɛ yɛn mpo a, ebia yebesisi yɛn aso. (Monkenkan Yohane 8:43-47.) Yesu ka kyerɛɛ Yudafo bi sɛ nea enti a wɔmpɛ sɛ wotie asɛm a ɔreka no ne sɛ ‘wɔpɛ sɛ wɔyɛ wɔn agya Ɔbonsam apɛde.’
13, 14. (a) Dɛn na abenfo ka fa yɛn adwene ne kasa ho? (b) Dɛn na ɛbɛma yɛatie asomasi anaa ɔbenten?
13 Ɛtɔ da bi a, nea yɛn koma pɛ sɛ yɛte no, na yɛte. (2 Pet. 3:5) Ɔkwan a Yehowa faa so yɛɛ adwene no yɛ nwonwa. Sɛ yɛmpɛ sɛ yɛte dede bi a, yetumi to yɛn adwene mu. Wo de, gyina kakra na tie dede a atwa wo ho ahyia seesei ara. Dede yi nyinaa rekɔ so, nanso emu pii wɔ hɔ a na w’adwene nni so koraa. Dɛn ntia? Sɛ wopɛ sɛ wutie dede a atwa wo ho ahyia nyinaa a wubetumi, nanso wopɛ sɛ wode w’adwene si emu biako pɛ so a, wubetumi ayɛ saa. Nanso sɛ ɛkɔba sɛ nnipa pii rekasa bere koro mu a, ɛno de ɛyɛ den sɛ wode w’adwene besi ne nyinaa so. Abenfo kyerɛ sɛ, sɛ nnipa baanu rekasa a, biako pɛ na yebetumi atie no. Eyi kyerɛ sɛ yɛn na ɛsɛ sɛ yɛpaw nea yebetie no. Nea wopɛ na wubetie no. Na Yudafo no pɛ sɛ wotie wɔn agya Ɔbonsam, enti na wɔantie Yesu no.
14 Bible ka sɛ ɔkwan bi so no, ‘anyansafo’ ne ‘nkwaseafo’ nyinaa pɛ sɛ yetie wɔn. (Mmeb. 9:1-5, 13-17) Ɛsɛ sɛ yɛn ankasa na yɛkyerɛ wɔn a yebetie wɔn. Ɛnde hena na yebetie no? Nea yɛpɛ sɛ yɛyɛ n’apɛde na yebetie no. Yesu nguan tie ne nne na wodi n’akyi. (Yoh. 10:16, 27) Saafo no wɔ “nokware no afã.” (Yoh. 18:37) “Wonnim ahɔho nne.” (Yoh. 10:5) Onyankopɔn hyɛ ahobrɛasefo a wɔte saa anuonyam.—Mmeb. 3:13, 16; 8:1, 18.
“ƐYƐ ANUONYAM MA MO”
15. Dɛn nti na na Paulo ahohia yɛ “anuonyam” ma afoforo?
15 Sɛ yegyina pintinn yɛ Yehowa apɛde a, ɛboa ma afoforo nya anuonyam. Paulo kyerɛw Efeso asafo no sɛ: “Mesrɛ sɛ mommma ahohia a mo nti merehyia yi mmmu mo abam, efisɛ ɛyɛ anuonyam ma mo.” (Efe. 3:13) Dɛn nti na na Paulo ahohia yɛ “anuonyam” ma Efesofo no? Ahohia a Paulo faa mu nyinaa no, ogyinaa mu yɛɛ ne som adwuma no, na ɛmaa Efesofo no hui sɛ ɛyɛ akwannya kɛse sɛ wɔyɛ Kristofo. Sɛ Paulo antumi annyina sɔhwɛ ahorow no mu a, ebia anka anuanom bɛka sɛ wɔn som, wɔn anidaso, anaa wɔne Yehowa adamfofa mpo nsom bo ahe biara. Paulo boasetɔ pagyaw Kristosom na ɛmaa anuanom hui sɛ biribiara a wɔde bɛbɔ afɔre abɛyɛ Kristoni no fata.
16. Dɛn na ɛtoo Paulo wɔ Listra?
16 Wo de, hwɛ sɛnea Paulo ahokeka ne ne boasetɔ boaa anuanom. Asomafo Nnwuma 14:19, 20 ka nea esii bere a Paulo wɔ Listra no. Ɛka sɛ: “Yudafo bi fi Antiokia ne Ikoniom bae bɛdan nnipakuw no ti, na wosiw Paulo abo twee no kɔɔ kurow no akyi susuw sɛ wawu. Nanso, bere a asuafo no twaa ne ho hyiae no, ɔsɔre kɔɔ kurow no mu. Na ade kyee no, ɔne Barnaba fii hɔ kɔɔ Derbe.” Wo de, hwɛ obi a wɔasiw no abo ma anka ɔreyɛ awu na ade kyee ara ɔbɛsɔre atwa kwan! Ɛnyɛ kar na ɔte mu, na mmom ɔrenantew atwa kilomita 100 (akwansin 60)!
17, 18. (a) Ɔkwan bɛn so na Timoteo dii Paulo “akyi pɛpɛɛpɛ” wɔ amane a ɛtoo no wɔ Listra no mu? (b) Paulo boasetɔ no kaa Timoteo dɛn?
17 Bere a wosiw Paulo abo no, na Timoteo ka “asuafo” a wɔwɔ hɔ no ho anaa? Asomfo Nnwuma no nhyɛ da nka de, nanso ebia na ɔka ho. Bere a Paulo kyerɛw krataa a ɛto so abien kɔmaa Timoteo no, ɔkae sɛ: “Wo de, nea woadi akyi pɛpɛɛpɛ ne me nkyerɛkyerɛ, m’asetena kwan.” Na Timoteo nim sɛ wɔasiw Paulo abo wɔ Listra. Saa ara nso na na onim sɛ Yudafo no apam no afi Antiokia. Afei nso na onim sɛ bere a Paulo wɔ Ikoniom no, nkurɔfo pɛe sɛ wosiw no abo. ‘Nanso Awurade gyee no fii ne nyinaa mu.’—2 Tim. 3:10, 11; Aso. 13:50; 14:5, 19.
18 Nsɛm a ɛtoo Paulo nyinaa no, Timoteo ‘dii akyi pɛpɛɛpɛ,’ na ohuu Paulo boasetɔ. Yebetumi aka sɛ eyi kaa Timoteo paa. Bere a Paulo kɔɔ Listra no, ohui sɛ Timoteo yɛ Kristoni a ɔyɛ nhwɛso pa, na “anuanom a wɔwɔ Listra ne Ikoniom no kaa ne ho asɛm pa.” (Aso. 16:1, 2) Timoteo ho kokwawee na akyiri yi wɔde asɛyɛde pii hyɛɛ ne nsa.—Filip. 2:19, 20; 1 Tim. 1:3.
19. Sɛ yenya boasetɔ a, ɛboa afoforo dɛn?
19 Sɛ yegyina pintinn yɛ Onyankopɔn apɛde a, ɛka afoforo. Ɛka mmabun titiriw ma wɔde ahokeka som Onyankopɔn. Mmabun hwɛ sɛnea yɛyɛ asɛnka adwuma no suasua. Bio nso sɛ yehyia nsɛnnennen a, wosua biribi fi ɔkwan a yɛfa so di ho dwuma no mu. Paulo nyaa “ade nyinaa mu boasetɔ” na ama ebinom ‘anya nkwagye ne daa anuonyam.’—2 Tim. 2:10.
Mpanyimfo mia wɔn ani som a, mmofra suasua wɔn
20. Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛkɔ so hwehwɛ anuonyam a Onyankopɔn de ma?
20 Enti ɛsɛ sɛ yɛkɔ so hwehwɛ “anuonyam a efi Onyankopɔn koro no nkyɛn.” (Yoh. 5:44; 7:18) Yehowa de “daa nkwa bɛma wɔn a wɔnam nnwuma pa so hwehwɛ anuonyam.” (Monkenkan Romafo 2:6, 7.) Bio nso yɛn boasetɔ boa afoforo ma wɔtena nokware no mu na wɔanya daa nkwa. Enti hwɛ na woamma biribiara anyɛ osiakwan na anuonyam a Onyankopɔn de ma no ammɔ wo.